Cabdulahi Abokor siduu ku hantay xilka wasiirnimo. | Salaan Media
2. Mida labaadna waa xilgudasho la,aan hadii uu oogaa kooxdan argagixiso ee subax kasta golaha la fadhidey sababta uu wax uga qaban waayey ee u soo xidh xidhi waayey ileen isagaa ahaa wasiirkii amniga qaranka qaabilsanaa.
Waa la xidhay caddee ayaa la yidhi waxan aad sheegtay.
Sifaha lagu qabtay sax ma ahayn hadana waan sheegayaa waqtigaasna maan raacsanayn sababtoo si fudud waa loo qaban karayey.
Lakin wuxu sheegay isaga laftigiisu shirkii jaraaid ee shalay inuu 12 xabo oo rasaas ah gurigiisa ka ridey .
Mar hadii uu intaas inu riday qirtay itaalkiisa ayay ahayd lakin waa la qabtay waa nin dagaalamay isaguna itaalkiisa.
Hadaba 3 june 2014 muuse biixi oo shir jaraaid qabtay ayaa isna ka hadlay xahdiga cabdulahi abokor .